Onye na-arụ ọrụ ịhụnanya na-eto eto na-arụ ọrụ na mpaghara Astrakhan - akwụkwọ akụkọ Potato System
в Na-elekwasị anya, Akụkọ Mmeri, Injinia / Teknụzụ
Ọrụ ugbo nke oge a abụghị nanị shọvel na hoes, kamakwa ngwá ọrụ ọhụrụ nke chọrọ ihe ọmụma na nkà ụfọdụ. Ma mgbe ndị ntorobịa nke oge a na-ahọrọ ọrụ ndị a na-achọsi ike na nnukwu obodo, onye na-arụ ọrụ traktọ na-arụ ọrụ Maxim Kirdyashev na-arụ ọrụ na Astrakhan Agrocomplex Enotaevka LLC ihe karịrị afọ isii. Ọ na-ahụ ịhụnanya pụrụ iche na ọrụ ya. Nke a na-akọ site na mpaghara akwụkwọ akụkọ "Enotaevsky Vestnik" na Astrakhan news portal.
Ọ họọrọ ọrụ ya nke ọma. Mgbe Maxim gụsịrị akwụkwọ na klas itoolu nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị na obodo Enotaevka, Maxim banyere alaka ụlọ ọrụ Astrakhan State University of Architecture na Civil Engineering dị ka onye na-arụzi ụgbọala.
Maxim na-ekwu, "A mụrụ m n'ime ime obodo, kemgbe m bụ nwata, a na-eji ngwá ọrụ eme ihe: M na-anakọta mgbe niile, gbanwee, mezie ihe."
Iwu ndị bụ́ isi ọ na-agbaso n'ọrụ ya bụ ịṅa ntị na ịdị irè. Ịntanetị na-eme ka o kwe omume itinye aka na nkuzi onwe onye, ​​​​ịmụ nuances nke ijikwa teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Maksim na-ekwu na ọtụtụ ndị na-ele ọrụ a na-arụ n'ala anya dị ka ihe siri ike na nke a na-akwụchaghị ụgwọ. Ma, dị ka ya si kwuo, nke a dị anya site na ịbụ ikpe: ọrụ ahụ na-adọrọ mmasị, nke ọha mmadụ, ụgwọ ọrụ dị elu ma kwụsie ike.
"Ọrụ a siri ike, ma ọ na-adọrọ mmasị. Ma taa, ịbụ onye ọkwọ ụgbọ ala traktọ pụtara ịbụ onye na-emepụta ihe ọhụrụ, ọrụ ugbo bụ mpaghara ebe ọ kacha mma ịrụ ọrụ. Otu ugboro kwa ọnwa isii, a na-enye ndị otu niile ego ego,” ka onye na-eto eto na-arụ ọrụ igwe kwuru.
N'oge okpomọkụ, n'oge oge, ndụ nke onye na-anya traktọ na-agbasi ike, na-enweghị ụbọchị ezumike na ezumike, ma mgbe ahụ enwere oge ezumike.
“Taa, ndị na-anya traktọ na-anya nnukwu ngwá ọrụ na-akpali nkwanye ùgwù. Ma ọ bụghị onye ọ bụla na-achọ ịkụtu ígwè na ịrụzi ígwè ọrụ ugbo. Na-enweghị ọchịchọ, ọ dịghị ihe ga-esi na ya pụta. A ghaghị ịhụ ọrụ a n'anya. Onye na-arụ ọrụ igwe bụ ọrụ na-adọrọ mmasị, ọ bụdị ihe okike ruo n'ókè ụfọdụ, ana m ahụkwa ịhụnanya n'ime ya, "Maxim Kirdyashev na-emesi obi ike.
isi: Portal akụkọ Astrakhan
Site: Enotaevsky onye ozi
Tags: Mpaghara Astrakhanndu n'ime ime obodoonye ọrụ igwe
Na mpaghara Chelyabinsk, a na-eme atụmatụ ịbawanye mmepụta nke akwụkwọ nri na poteto site na 2025
Ndị na-akụ ihe ọkụkụ zutere ndị ọkà mmụta sayensị n'otu nnyocha na mmepụta ihe